Ulwazi loMvakalisi kwi-Museum ye-Picasso Museum yaseBrazil
Yurophu Speyin E Barcelona
Isikhokelo sakho kwiMyuziyam yase-Barcelona yePicasso
Indlela yokujonga ubugcisa bukaCalasso kwilizwe lakhe
Ukuba kukho nayiphi na indlela unomdla ebomini bukaPablo Picasso, okanye ubugcisa bobugcisa ngokubanzi, i-Barcelona kufuneka ibe yindawo yokuqala yokufowuna. Imyuziyam yasePalasso e-Barcelona (okanye i- Museu Picasso kwisiCatalan, ulwimi lwasekuhlaleni) ineziqokelelo ezininzi ezihlelwe ngokulandelelana kwexesha. Ikunikezela ngokungenakuqhathaniswa nokujongana nomsebenzi wonke wenkosi, kuwo onke amaninzi amaxesha obugcisa.
Ewe, kukho ezininzi, ezinye iimyuziyamu eziseBarcelona, ​​zizungeze ezinye iingcali ezininzi.
Ukuba unomdla ekuboneni yonke inkcubeko yaseBrazil inokunikela, zama i- Barcelona Card , enokukufumana i-50% isaphulelo ekungeneni kuwo uluhlu olupheleleyo lwemyuziyamu zendawo, kuquka iMyuziyam.
Imyuziyam yasePalasso e-Barcelona ikhona kwiCarrer Montcada , enye yezitrato ezithandwa kakhulu e-Barcelona. Qiniseka ukuba uceba uhambo lwakho ngalokhu engqondweni.
Kulungile, ngoko uzimisele ukutyelela i-Picasso Museum ngelixa e-Barcelona. Yintoni ofuna ukuyifumana?
Unokufumana i-museum kwiC / Montcada 15-23, 08003, Barcelona. Amanani emathikiti ayahluka ukusuka kwi-4 € ukuya kwi-9 €, kuxhomekeke ekubeni unamaqela okanye akunjalo kwaye ukuba uhambele umboniso wesikhashana kunye nokuqokelela. Hlola iwebhusayithi yeMyuziyam ukuze ubone ukuba yeyiphi imiboniso okwangoku .
Ukungena kwiMyuziyam yasePacasso ikhululekile ngeCawa yokuqala yenyanga, kodwa kukho i-caveat enkulu: umgca awukho ixesha elide.
Ukuba ufuna ukuyisebenzisa ngokunjalo (nangona kunesantya) unikezela, qiniseka ukuba ufike kusasa, kwaye mhlawumbi upake i-snack xa uhamba phakathi emini, njengoko uya kuba seenyawo zakho ixesha elide.
Jonga i-Barcelona ukusuka kwi-Eye ye-Picasso
Kungakhathaliseki ukuba zininzi zengcali kwi Picasso, unokuhlala ufumana ithuba lokufunda into entsha!
Imyuziyam ye-Picasso inikeza iindwendwe ezikhokelwa ngokukhululekile zokuqokelela kwabo ngeLwesine kunye neMigqibelo. Uhambo lweeNgesi luqala ngo-6 ntambama ngoLwesine kunye no-12 ntambama ngoMgqibelo.
Ngomdlali oyinyaniso, kukho umqhubi wezotyelelo wendawo ohambisa uhambo olukhokelwayo kwiMyuziyam yasePicasso kunye nokutyelela kwiindawo ezizithandayo zeBarcelona. I-Picasso yaseBrazil iyona ndawo, ngoko le tyelelo liyisingeniso esilungileyo kwisixeko, ekuboniseni ezinye zezona ndawo zikhulu ukusuka kwindawo yokujonga kwePablo Picasso. Kukwahle kakhulu kakhulu! Unokukhangela uhambo lwakho apha !
Kukho ezinye iindwendwe ezimbalwa ezibonakalayo ezinokubaluleka ukujonga-ungazifumana zonke apha .
Ekubeni i-Picasso Museum ihlala kwindawo ephakathi, kukho ininzi yeehotele ezithengiyo ezikufutshane. Ukuba unqwenela ukuhlala kuloo ndawo, nolu luhlu lweendawo zokuhlala ezikufuphi kumyuziyam .
I-Barcelona ukuya kuNice ngeTear, iBhasi, iCar neenqwelo
Ungayifumana phi i-Bullfighting kufuphi ne-Barcelona
Iindwendwe ezikhokelwa nguMontserrat ezivela e-Barcelona
Ukucwangcisa ngo-Ephreli Isimo sezulu e-Barcelona
Into enokuyenza kwiKota yeGothic eBarcelona
Iibhasi neeTesitereji e Barcelona
I-Orlando Museum yoMthendeleko weMithi
Amasango e-Graves Abantu abaPhezulu ePacific Northwest
Uhlala phi kwi-Universal Orlando Resort
Ottertoberfest kwiSt. Louis Zoo
Iingcebiso Zokukhusela Abasetyhini Abahamba Ngedwa ePeru
Ukutya ngaphandle eBethesda, MD - Ukuhlala ngaphandle
Ama-ATM Asemanye amazwe - Iingcebiso zokuhamba
IiSpredishithi eSan Diego: Kukuphi Ukufumana Ukutya Kwakho
I-Weekend Walk Weekend yeDupont-Kalorama
7 Iingqungquthela ezinokuthakazelisa kunye neehotele eMilwaukee
IiMyuziyamu Zilwe Nxamnye neSISIS
I-Waikiki SPAM Jam